laacib » Rikooradii laga diiwaan geliyey kulankii kooxda West Bromwich Albion ay Man United guusha kaga gaartay Old Trafford
Rikooradii laga diiwaan geliyey kulankii kooxda West Bromwich Albion ay Man United guusha kaga gaartay Old Trafford
Kooxaha West Bromwich Albion ayaa kulan ka tirsan horyaalka Premier League waxa ay caawa 1-0 uga adkaatay Manchester United oo ku dheeleysay garoonkeeda Old Trafford.
West Bromwich Albion goolka qura oo ay ciyaarta guusha ku adkaatay waxaa u dhaliyey 73’daqiiqo Jay Rodriguez, kaddib markii uu ka faa’iideystay koorno la soo qaaday oo uu madax ku dhaliyey, Man United ayaana 1-0 looga adkaaday.
Haddaba halkaan hoose ka eeg rikooradii laga diiwaan geliyey kulankii ka dhacay Old Trafford:-
>- West Bromwich Albion ayaa hal jeer oo qura guuldarro la kulantay shantii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay booqatay garoonka Old Trafford waxaana ay haysataa 3 guul 1 barbaro iyo 1 guuldarro, waxaana guuldaradaas qura ay timid bishii November sanadkii 2015-kii, markaasoo looga adkaaday West Brom 0-2.
>- Waxa ay noqonaysaa markii labaad ee taariikhda Premier League ay Manchester United guuldarro kala kulantay laacibkii ugu hooseysa horyaalka iyadoo ku dheeleysa Old Trafford, kulanka kalena waxa uu ahaa guuldarro 2-3 ah oo ka soo gaartay Blackburn Rovers bishii December ee sanadkii 2011-kii.
>- Tan iyo markii Jose Mourinho loo magacaabay macallinka Manchester Unietd xagaagii 2016-kii, afar kooxood ayaa helay dhibco ka badan Premier League Red Devils oo heshay 140-dhibcood, waxaana ay kala yihiin Manchester City (165), Chelsea (153), Tottenham Hotspur (153) iyo Liverpool (146).
>- Macallin Darren Moore ayaa barbareeyey Alan Pardew wadar ahaan guulaha Premier League ee ah 1 guul 18 kulan, macallin WBA waa kulankiisii labaad isagoo macallin u ah laacibkii.
> Tababare Darren Moore ayaa ku hoggaamiyey laacibkii WBA afar dhibcood labadiisa kulan ee uu tababaraha u yahay waxaana uu haystaa 1 guul iyo 1 barbaro, isagoo aan la kulmin wax guuldarro ah, waana in la mid ah intii uu laacibkii ku hoggaamiyey macallin Alan Pardew 11-kiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu tababaraha u ahaa kooxdaas (1 guul, 1 barbaro iyo 9 guuldarro).
>- Xiddiga goolka guusha ka dhaliyey Man United ee Jay Rodriguez ayaa dhaliyey goolal badan afartiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ka soo muuqday horyaalka Premier League waxaana uu dhaliyey 3-gool, waana in ka badan intii uu dhaliyey 26 kulan markaas ka hor.
>- Jay Rodriguez ayaa 7 gool oo uu dhaliyey lix dhibcood oo Premier League ah ku siiyey kooxdiisa WBA xilli ciyaareedkan, waana in ka badan goolasha ay dhibcaha kooxdooda ku siiyeen Gabriel Jesus (10 gool – 2 dhibcood), Roberto Firmino (15 gool – 4 dhibcood), Alexandre Lacazette (11 gool – 4 dhibcood), Alvaro Morata (11 gool, 4 dhibcood) iyo Jamie Vardy (17 gool – 5 dhibcood).